खसी, बोका, कुखुरा र राँगाको मासुको मूल्य निर्धारण, प्रतिकिलो कति? – Kavrepati
Home / Uncategorized / खसी, बोका, कुखुरा र राँगाको मासुको मूल्य निर्धारण, प्रतिकिलो कति?
admin3weeks ago	Uncategorized Leaveacomment 239 Views
काठमाडौँ, असोज २१ । मासु व्यवसायीहरुले दशैँका लागि खसी तथा बोकाको मासुको मूल्य निर्धारण गरेका छन् । चाडपर्वको मौका छोपीे आफूखुशी मूल्य लिनुभन्दा एकरुपता ल्याउन मूल्य निर्धारण गरिएको व्यवसायीहरुले बताएका हुन् ।
Previous यीनै हुन् पुर्ब युबराज पारस शाहको निबासमा चोरी गर्ने युवा,
Next ग्रीनकार्ड होल्डरको अनुभव: अमेरिकामा पैसाको बोट रहेनछ, डिभी नपरे गर्व गर्नुहोस्